CS:GO Support ကစားသမားကောငျး တဈယောကျဖွဈဖို့ ဘယျလို လကေ့ငျြ့နိုငျမလဲ? – Gaming Noodle
CS:GO Support ကစားသမားကောငျး တဈယောကျဖွဈဖို့ ဘယျလို လကေ့ငျြ့နိုငျမလဲ?
အရငျအပါတျတုနျးက CS:GO Support Player ဆိုတာကို အဓိပ်ပါယျ ဖှငျ့ဆိုခဲ့ပွီးပွီဆိုတော့ ဒုတိယပိုငျအနနေဲ့ Support ကစား‌‌ တော့မယျဆိုရငျဘာ‌တှေ လုပျသငျ့လုပျထိုကျလဲဆိုတာကို ဆကျလကျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ (ပထမပိုငျးကို ဒီ Link မှာ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ)
ဘယျသူတှေ support ကစားနိုငျမလဲ?
လူတိုငျးကစားနိုငျပါတယျ။ ဗုံးပဈတတျတဲ့သူဖွဈဖွဈ သယျတဲ့သူဖွဈဖွဈဆော့လို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Support player တဈယောကျဆိုရငျတော့ ဗုံးလညျးပဈတတျရမှာဖွဈသလို ဂိမျးကိုလညျး ကောငျးကောငျး နားလညျဖတျတတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အဲ့ဒါမှသာ ခကျခဲတဲ့ အခွအေနတှေမှော ရုနျးထှကျနိုငျမှာပါ။
သငျ့အသငျးမှာ support type လိုအပျနပွေီဆိုရငျတော့ ဂိမျးကိုကောငျးကောငျးဖတျတတျပွီး ကစားပုံအလိုကျ ပွောငျးလဲပွီး‌ ဆော့တတျတဲ့သူထဲက ရှာသငျ့ပါတယျ။ Gameအကွောငျးကို ကောငျးကောငျး နားလညျပွီး အသငျးကို ဦးစားပေးတတျတဲ့သူတှဆေို ပိုလို့တောငျ အဆငျပွမှောပါ။ ဒီလိုကစားသမားမြိုးက လုံးဝကို အဖိုးတနျ ရှားပါးတဲ့ ကစားသမားပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Empty Server မှာ ဘယျသူမှ အားအားယားယား ဗုံးထိုငျ‌ပဈတာ ကငျြ့နဖေို့ တျောတျောခကျတာ မို့လို့ပါပဲ။
Support player တှဟောအမွဲတမျး ဗုံးပဈကငျြ့နတေဲ့အတှကျ သူတို့မှာ Strategies အသဈတှရေပွီး အသငျးကို ကူညီထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။Support player တှဟော တကယျအရေးပါတဲ့သူတှပေါပဲ။ Band တဈခုက Bass player လိုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ထငျသလောကျ အသိအမှတျအပွုမခံရပါဘူး။ အပျေါမှာ ပွောထားတဲ့ Skills တှသောရှိရငျတော့ သငျ့ကိုယျသငျ Support ဆော့နိုငျပွီလို့ သတျမှတျလို့ရပါတယျ။
CS:GO ကလကေ့ငျြ့ဖို့ နညျးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ပထမဆုံးကတော့ ခငျဗြား သနေတျကောငျးကောငျး မပဈတတျဘူးဆိုရငျတော့ CS:GO player မဖွဈနိုငျပါဘူး။ အကောငျးဆုံးကတော့ လကေ့ငျြ့မယျဆို Empty Map မှာ သှားကငျြ့ဖို့ပါပဲ။ ကိုယျ့သူငယျခငျြး တဈယောကျယောကျ ရှိမယျဆိုရငျတော့ သူ့ကိုပါ ချေါပွီး Position တဈခုမှာနခေိုငျးထားပွီး စိတျကွိုကျဗုံးပဈတာ စမျးလို့ရပါပွီ။
လကေ့ငျြ့မယျဆိုရငျတော့ 128 tick server မှာရှိနဖေို့ လိုပါတယျ။ 64 tickrate မှာတော့ ဗုံးပဈရတာ အနညျးငယျ ခွားနားမှု ရှိနိုငျပါတယျ။ Retake servers လိုမြိုးမှာ ကွိုးစားရငျတော့ ပိုအဆငျပွပေါတယျ။ အဲ့ server မှာ terrorists က bomb site မှာ bomb နဲ့ spawn ဖွဈပွီး CT က တခွား retake တခွား position မှာပါ ဘယျ weapon နဲ့ spawn ဖွဈမလဲပါ ရှေးလို့ရပါတယျ။ အဲ့တာကွောငျ့ ဒီလိုနရောမြိုးဟာ ဗုံးပဈကငျြ့ဖို့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
ရှေးခယျြရခကျတဲ့အခြိနျမှာလညျး ဆုံးဖွတျရတာ လှယျကူစပေါတယျ။ ဥပမာ 1vs1 situation တို့ဘာတို့မှာ မြိုးဆို Training လုပျတုနျးက ကိုယျကွုံ‌‌တှခေဲ့ ပွီးသားဆိုရငျ အေးဆေး ကြျောဖွတျနိုငျမှာပါ။
Pros တှရေဲ့ Clip တှကွေညျ့ပါ
Xyp9x & KRIMZ
နောကျတဈခုလုပျသငျ့တာက Pros တှရေဲ့ Stream တှကေိုကွညျ့တာပါ။ ဒီလို Streams တှေ Demos တှကေိုကွညျ့ရငျ မတူတဲ့အမွငျတှကေို ရရှိစမှောဖွဈပွီး ကစားရတာပိုအဆငျပွစေမှောပါ။ ကွညျ့သငျ့တဲ့ Pro တှကေတော့ Freddy ‘KRIMZ’ Johansson(Fnatic) နဲ့ Andreas ‘Xyp9x’ Hojsleth(Astralis) တို့ဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈ‌ယောကျရဲ့ ကစားကှကျကို ကောငျးကောငျးလလေ့ာရငျ တျောတျောလေး အဆငျပွပွေီလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
CS:GO Support ကစားသမားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို လေ့ကျင့်နိုင်မလဲ?
အရင်အပါတ်တုန်းက CS:GO Support Player ဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ဒုတိယပိုင်အနေနဲ့ Support ကစား‌‌ တော့မယ်ဆိုရင်ဘာ‌တွေ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်လဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (ပထမပိုင်းကို ဒီ Link မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်)
ဘယ်သူတွေ support ကစားနိုင်မလဲ?
လူတိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ဗုံးပစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ် သယ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဆော့လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Support player တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဗုံးလည်းပစ်တတ်ရမှာဖြစ်သလို ဂိမ်းကိုလည်း ကောင်းကောင်း နားလည်ဖတ်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါမှသာ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ရုန်းထွက်နိုင်မှာပါ။
သင့်အသင်းမှာ support type လိုအပ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဂိမ်းကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်ပြီး ကစားပုံအလိုက် ပြောင်းလဲပြီး‌ ဆော့တတ်တဲ့သူထဲက ရှာသင့်ပါတယ်။ Gameအကြောင်းကို ကောင်းကောင်း နားလည်ပြီး အသင်းကို ဦးစားပေးတတ်တဲ့သူတွေဆို ပိုလို့တောင် အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒီလိုကစားသမားမျိုးက လုံးဝကို အဖိုးတန် ရှားပါးတဲ့ ကစားသမားပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Empty Server မှာ ဘယ်သူမှ အားအားယားယား ဗုံးထိုင်‌ပစ်တာ ကျင့်နေဖို့ တော်တော်ခက်တာ မို့လို့ပါပဲ။
Support player တွေဟာအမြဲတမ်း ဗုံးပစ်ကျင့်နေတဲ့အတွက် သူတို့မှာ Strategies အသစ်တွေရပြီး အသင်းကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။Support player တွေဟာ တကယ်အရေးပါတဲ့သူတွေပါပဲ။ Band တစ်ခုက Bass player လိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ထင်သလောက် အသိအမှတ်အပြုမခံရပါဘူး။ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ Skills တွေသာရှိရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင် Support ဆော့နိုင်ပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
CS:GO ကလေ့ကျင့်ဖို့ နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ ခင်ဗျား သေနတ်ကောင်းကောင်း မပစ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ CS:GO player မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ လေ့ကျင့်မယ်ဆို Empty Map မှာ သွားကျင့်ဖို့ပါပဲ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက် ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုပါ ခေါ်ပြီး Position တစ်ခုမှာနေခိုင်းထားပြီး စိတ်ကြိုက်ဗုံးပစ်တာ စမ်းလို့ရပါပြီ။
လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ 128 tick server မှာရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။ 64 tickrate မှာတော့ ဗုံးပစ်ရတာ အနည်းငယ် ခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ Retake servers လိုမျိုးမှာ ကြိုးစားရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အဲ့ server မှာ terrorists က bomb site မှာ bomb နဲ့ spawn ဖြစ်ပြီး CT က တခြား retake တခြား position မှာပါ ဘယ် weapon နဲ့ spawn ဖြစ်မလဲပါ ရွေးလို့ရပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဒီလိုနေရာမျိုးဟာ ဗုံးပစ်ကျင့်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဆုံးဖြတ်ရတာ လွယ်ကူစေပါတယ်။ ဥပမာ 1vs1 situation တို့ဘာတို့မှာ မျိုးဆို Training လုပ်တုန်းက ကိုယ်ကြုံ‌‌တွေ့ခဲ့ ပြီးသားဆိုရင် အေးဆေး ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပါ။
Pros တွေရဲ့ Clip တွေကြည့်ပါ
နောက်တစ်ခုလုပ်သင့်တာက Pros တွေရဲ့ Stream တွေကိုကြည့်တာပါ။ ဒီလို Streams တွေ Demos တွေကိုကြည့်ရင် မတူတဲ့အမြင်တွေကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး ကစားရတာပိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။ ကြည့်သင့်တဲ့ Pro တွေကတော့ Freddy ‘KRIMZ’ Johansson(Fnatic) နဲ့ Andreas ‘Xyp9x’ Hojsleth(Astralis) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်‌ယောက်ရဲ့ ကစားကွက်ကို ကောင်းကောင်းလေ့လာရင် တော်တော်လေး အဆင်ပြေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။